Skype vesos Face oge
Lelee Skype na ntụnyere oge 2020
June 11, 2020 site Facetime Guide Nkume a Comment
Irè nwere uru dị mkpa n'ụwa taa. Ma na ị chọrọ ịgwa ndị enyi na ezinụlọ ma ọ bụ na ị chọrọ ka ejikọrọ na ọrụ nke azụmahịa gị, gị mkpa a zuru okè ngwá ọrụ nke nwere ike inyere gị aka imezu gị chọrọ.
N'oge gara aga, ndị mmadụ na-eme Gburu ịkpọtụrụ ndị ọzọ, ma ugbu a, ndị na-ahọrọ ime video chats site video chat nyiwe. Maka irè, ọtụtụ ụlọ ọrụ na ulo oru ha video telephony ngwa na ekwe ka i na-edebe oku site na ebe ọ bụla gburugburu ụwa.
N'etiti ihe niile ndị a mmekọrịta software, abụọ apps mgbe ghọtara uche nke ụwa. Abụọ ndị a ịma aka ngwa ọdịnala na n'ọtụtụ ebe, ghọtara dị Face Time na Skype.
na-akpali mmasị, ma ngwa ọdịnala (Face Time na Skype) na-e maka otu nzube na ọchịchị ha ọrụ iji nweta mmadụ nọ n'ọrụ, ka ọdịyo ma ọ bụ video oku, ime ozi ederede, ka otu video oku na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ị nwere ike mfe iji ndị a ngwa ọdịnala na dị iche iche ngwaọrụ tinyere gị smartphones, mbadamba, desktọpụ, windo, okwu nche, iPods na ọtụtụ ndị ọzọ.
A video chat ngwa ọdịnala na ọ mere ya astoundingly mfe maka niile ọrụ na-ejikọrọ na onye ọ bụla ọzọ n'ime sekọnd irrespective nke region, anya ma ọ bụ oge. Ha mere ka o kwe gị na-enwe gị ezumike ma ọ bụ na-elekwasị anya na azụmahịa gị njem na-anọ jikọrọ gị na ezinụlọ gị, ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa. Ma apps bụ oké obere, ahịa enyi na enyi na gh.
ma, ka, e nwere pụrụ iche atụmatụ nke ọdịiche dị ndị a ngwa ọdịnala na ibe. Ke ibuotikọ emi, ị ga-ahụ zuru ezu echiche nke asọmpi atụmatụ, larịị nke ndakọrịta, mwekota, na àgwà nke ma Skype na Face Oge. Isiokwu a ga-ekwe ka ị na-ekpebi nke software suut edebezu dị ka gị mkpa.
0.2 Ndakọrịta nke Skype:
1 Akụkụ nke Skype
1.1 Integration nke Skype
1.2 Quality nke Skype:
1.3 About Face Oge:
1.4 Ndakọrịta nke Face Oge:
2 Akụkụ nke Face Oge:
2.1 Integration nke Face Oge:
2.2 Quality n'Ofufe Face Oge:
2.3 Ihe ndị ọzọ si na saịtị m
Otu n'ime ndị kasị juru na kasị achọ video conferencing apps bụ Skype. Nke a na-eji ngwa ahụ na mbụ oru na 2003 na mgbe a afọ ole na ole na 2011 Microsoft Company zụrụ ya. Microsoft mere nke a ndibiat ke $8.5 ijeri. The echiche bụ isi nke a software bụ na-ekwe ka ya ọrụ na-eduzi na-akparaghị ókè video na audio oku.
Tụkwasị na nke a, Skype na-enye ya ahịa ọrụ nke ozi ederede na-adọrọ mmasị na mmetụta uche na akwụkwọ mmado. Skype mgbe lekwasịrị anya iji mezuo ya ahịa chọrọ. Ruru ya oru oma N'ihi gbakwasara na-arụpụta, Skype enwetela a nnukwu mmeri.
Na na ya elu definition nke ọdịyo na video oku, Skype ka dọtara ọtụtụ ndị ike nke mba oku. Ndị a nile ịrịba ọrụ, Skype ọma jisiri ka aha ya dị iche iche ikpe na Bulletins.
Ndakọrịta nke Skype:
Otu n'ime ndị kasị uru nke Skype bụ, a ngwa na-arụ ọrụ maka ọtụtụ ngwaọrụ. Ị nwere ike ịnọgide mmachi mgbe eji nke a video conferencing ngwa. The na-enye na ọrụ nke Skype ekwukwa niile ngwaọrụ tinyere mobile phones, windo, kọmputa, mbadamba, na ndị ọzọ na egwuregwu n'elu ikpo okwu ngwaọrụ.
Ruru ya buru ibu ọrụ na ndakọrịta, Skype nwere ọtụtụ ahịa nke Sony, Play Station, smartphones, windo, OS X ngwaọrụ, gam akporo, Blackberry, Symbian, Samsung Smart TV, etc.
Akụkụ nke Skype
Ná mmalite, Skype e mere na-enye audio oku nhọrọ ya ahịa. Ma mgbe elu ina na-agbanwe agbanwe na ọnọdụ nke nkwurịta okwu, ya mgbe e mesịrị malitere àjà nzi ozi na video oku na ụwa.
N'adịghị ka Face Oge, Skype na-adịghị e mere na-enye naanị online video ma ọ bụ ọdịyo oku. Ọ na-enye ohere ị na-akpọ onye ọ bụla na Landline ma ọ bụ nọmba ekwentị. Nke a na atụmatụ bụ n'ezie na-enye aka ime ka ndị mmadụ ebe njikọ Ịntanetị bụ ogbenye ma ọ bụ onye na-adịghị.
Maka online video ma ọ bụ ọdịyo oku, Skype ka ụgwọ ihe ọ bụla. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ na-akpọ on mba nọmba, mobile nọmba ma ọ bụ Landline nọmba, mgbe ị ga-akwụ a na ndenye aha ego. Skype awade mara mma atụmatụ na-tụrụ ụtụ maka offline oku.
The udu ịdị iche iche na-adabere na mpaghara gị na akwụkwọ ego. Anyị pụrụ ịtụle Skype dị ka onye ọzọ nke Landline ma ka, a ngwa nwere ike ghara ime ka ya nnọchi. Otu n'ime isi ihe kpatara ya bụ na i nwere ike ime na mberede oku site na Skype.
Iji rụọ ọrụ Skype, i nwere ike iji ma Wi-Fi njikọ Ịntanetị ma ọ bụ gị cellular netwọk data. Iji malite iji Skype, ị ga-enwe gị Microsoft email id ma ọ bụ Skype ID. Ozugbo ị ga-nbanye gị Skype akaụntụ, ị ga-ahụ a ndepụta na kọntaktị nke na-ama aka iso site software.
Ị dị nnọọ nwere pịa na ọrụ ị chọrọ na-akpọ. I nwere ike ịchọ ihe ọ bụla nke chọrọ kọntaktị site na-ede ya ma ọ bụ ya aha na search mmanya. Ị pụrụ ime ka a na ndepụta gị kasị eji kọntaktị site na-agbakwụnye ha na ọkacha mmasị.
Mgbe gị na oku vidiyo, Skype awade multiple nhọrọ tinyere ogbi oku, mgba ọkụ igwefoto, olu-na-mode na Akwụsịkwala oku. Skype-anapụtakwa nnọọ mmekọrịta ozi ọrụ ya ọrụ.
n'ihi na nzuzo, Skype-enye gị ohere na-egbochi ma ọ bụ ihichapụ kọntaktị. Tụkwasị na nke a, ọ na-ekwe ka ị na-eleghara ozi arịrịọ uru ọ bụla ma ọ bụrụ na ị na-amaghị ya ma ọ bụ ya.
Integration nke Skype
Ma ị bụ onye na OS X ọrụ ma ọ bụ iOS ọrụ; ị nwere ike ịnweta adreesị gị akwụkwọ na kọntaktị site na iji Skype. Skype ike ichegharị oku ọ bụla ọnụ ọgụgụ na ị chọrọ. I nwere ike inweta ọrụ a site na azụ Skype n'aka. Skype bụ kpam kpam a video conferencing n'elu ikpo okwu na-enye ohere ọrụ nke dị iche iche na ngwaọrụ na-ejikọrọ site na iji otu software.
Quality nke Skype:
dị mwute ikwu na, Skype adịghị enye ezigbo àgwà nke ọdịyo na video oku. Mgbe ụfọdụ, ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-eji elu-ọsọ internet, ị ka nwere ike na-eche ihu ala mkpebi na shuttering video oku.
Ndị a okwu na-ọbụna ihe mgbagwoju anya ma ọ bụrụ na ị na-agbalị iji Skype n'oge ngwụsị izu. The n'ezie ihe kpatara ya bụ, Skype na àjà ya ọrụ niile na ngwaọrụ na n'ihi na-akparaghị ókè ọtụtụ ọrụ, ndị mmadụ na-eche ihu a quality nke. The ezi ihe na-na otu nke Skype na-arụ ọrụ iji dozie ihe iseokwu a na-eme ka ndị ahịa afọ ojuju.
About Face Oge:
Face Time bụ otu n'ime ndị a ma ama software na mgbe nile na-eme ka ya ọrụ ụtọ na afọ ojuju. Nke a video telephony software na oru site Apple na 2011. Nke a software na-nanị iji mee mfe maka Apple ngwaọrụ ọrụ gụnyere iPads, iPhones, iPods, na Macs nọgidesie interlinked site na-anụ ụtọ video na audio interactions.
Face Time na-ekpori a nnukwu mmaji nke afọ ojuju ahịa. Dị ka nnyocha e mere, karịrị 70 nde OS X ọrụ na iOS ọrụ na-na-ewere enyemaka nke Face Time ịgwa ndị ọrụ ndị ọzọ.
Ndakọrịta nke Face Oge:
I nwere ike na-agba ọsọ nke a software na Apple ngwaọrụ. Ị ga-enwe a Mac ma ọ bụ iOS ngwaọrụ n'ihu n'ihu ese foto na-amalite gị video oku na-aga site na Face Oge. Face Oge nwere mmachi ndakọrịta na ọ bụ nanị inweta maka Apple ngwaọrụ. Ị nwere ike malite iji Face Oge ma ọ bụrụ na i nwere ihe ọ bụla nke ndị na-esonụ
iPad 2 ma ọ bụ mgbe e mesịrị,
iPhone 4 ma ọ bụ mgbe e mesịrị
4nke ọgbọ iPod ma ọ bụ mgbe e mesịrị
Mac OS X 10.6.6 na mgbe e mesịrị
Ọ bụrụ na gị na ngwaọrụ na-adịghị ihe na-wuru igwefoto, mgbe ị ga-itinye mpụga web igwefoto na-amalite na-eduzi video oku.
Akụkụ nke Face Oge:
Ná mmalite, Face Time na-enye ohere ya ahịa inweta ya ọrụ site na iji WiFi netwọk njikọ naanị. Ma, ya na ọganihu na evolushọn nke technology, ọ kwere ya ahịa na-agba ọsọ a ngwa site na iji data cellular netwọk dị ka nke ọma.
Otu asọmpi uru nke Face Time bụ, n'adịghị Skype ị na-adịghị na-aga site na usoro nke ijikwa akaụntụ. Ozugbo ị na-amalite site na iji Face Oge, ọ na-akpaghị aka integrates na nẹ niile chọrọ data nke okwu akwụkwọ na kọntaktị maka iOS na OS X ọrụ.
Face Time dị mfe iji. Mgbe ị pịa button ebe gị oku, i nwere ike ele dị iche iche bara uru nhọrọ tinyere mgba ọkụ igwefoto, ogbi okwu ma ọ bụ kwụsị gị oku. Apple adịghị enye ya ahịa VoIP ọrụ na Skype eme.
Integration nke Face Oge:
Apple nwere onu iwekota ma elu-arụmọrụ software na ngwaike maka video telephony ọrụ. Face Oge e mere na-enye ihe na A-usoro "usoro na a mgbawa" na iSight igwefoto. Iji nye paramount pụta video na audio oku, Face Oge anaghị arụ ọrụ na ọ bụla ala bandwit njikọ.
Apple ka mgbe strived ike ime ka adịchaghị mma na ịrịba ama na-edebere ndị ngwa ọdịnala ya ahịa. Face Time na-e na otu nkà ihe ọmụma nke Apple, unu ghara inwe ike ogbenye video njehie na olu tụlee mgbe gị nkwurịta okwu. Face Oge a haziri dị ka ilekota nke ụwa nke Apple.
Quality n'Ofufe Face Oge:
Apple ka mgbe pụta ìhè na àgwà na mma nke ọrụ na ha na-enye. Nke a bụ ihe mere ruru nke Face Oge nwere ezi mma karịa ya osompi Skype. Face Time awade elu-edu video telephony ọrụ dabere na mba ụkpụrụ.
N'ihi na ma video na audio oku, Face Time na-enye mma-kọwaa, Iweputa, doro anya ụda na vibrant picture na-eji ire ụtọ ngagharị.
Nke a dị ịtụnanya ngwa nke Face Time kwe gị ka anyị na-echeta mara mma, na anọ n'ọnụ na iji mee ozi.
The mgbe nile na ezi mma nkwurịta okwu dịkwa oké mkpa mgbe i nwere mkpa n'ezie ihe na-ezitere, ma ọ bụ na ị chọrọ inye gị ma ọ bụ na ị chọrọ ka o doo gị ahịa na gị ire pitch na ndepụta na-aga.
Face Time na Skype, ma na-ịrịba ngwa ọdịnala n'ihi na-eduzi video ma ọ bụ ọdịyo oku. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ nke Apple na ngwaọrụ ma ị chọrọ na-enweta ndị kasị mma àgwà mgbe ahụ ị ga-eji Face Oge.
N'adịghị, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka jikọtara ndị mmadụ n'èzí nke ụwa nke Apple ngwaọrụ mgbe Skype bụ ihe kasị mma definitive oke maka ị.
Ihe ndị ọzọ si na saịtị m
Etu ị ga-esi jiri Skype rụọ ọrụ na gam akporo ngwaọrụ
Easyzọ dị mfe iji budata ma wụnye oge na i-Pad
Etu esi etinye ma jiri ya mee ihe na Mac
Otu esi ebudata ma jiri oge gị na PC
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Download Facetime